Ahoana no ahafahana mamadika rindran-tserasera amin'ny aterineto mampiasa fitaovana samihafa?
Ao amin'ny tontolo ara-barotra maoderina, ny rindran-damina dia mbola ampahany manan-danja amin'ny soso-kevitry ny fikarohana sy ny vahaolana tonga lafatra ho an'ireo izay te-hanangona ny fikarohana karazan'ny fikarohana. Na izany aza, ny fampiharana mila ampiasaina amin'ny famokarana rindranasa dia toa mahasosotra ary mitondra olana amin'ny webmasters. Amin'izao fotoana izao, ny milina fikarohana dia manome lanjany ny kalitao sy ny lanjany ho an'ny backlinks fa tsy ny isan'izy ireo. Ireo rohy fananganana rohy tahaka ny backlinks Free-For-All sy ny spam-kevitra dia tsy afaka hitondra ny lanjany ho an'ny fanentanana fanentanana fikarohana ataonao. Aorian'i Google, ny torolàlana dia mety ho mampalahelo, saingy io no hany fomba hahatongavana amin'ny TOP SERP. Soa ihany fa ny fahombiazan'ireo sehatra maro dia manome fahafahana tonga lafatra mba hamoronana rakitra.
Pinterest dia ohatra tena tsara amin'ny sehatry ny fampahalalam-baovao mahomby ao anatin'ny fotoana fohy. Izany dia maneho fa amin'ny alalan'ny fomba mahomby amin'ny fanentanana fananganana rohy dia hanana fotoana ahafahana mamorona rindran-damina be dia be ianao ao anatin'ny fotoana fohy ary hanatsara ny fahatsiarovanao ny marika amin'ny dingana.
Raha manontany tena ianao hoe ahoana ny stratejia Pinterest dia afaka manampy anao hanangana fanentanana fananganana rohy raha manana sahady ara-tsosialy hafa ianao, ny porofo sasany dia hamaly ny fanontanianao:
5 tapitrisa isan'andro Ireo mpampiasa mafàna fo dia manokatra Pinterest noho ny antony samihafa;
misy ny mpisera 176 tapitrisa izay manonona ny Pinterest, avy amin'izy ireo ny isan'ireo olona mampiasa io sehatra media io 150 tapitrisa;
mihoatra ny 50% amin'ireo Amerikanina izay mitazona ny fitakian'ny fividianana an-tserasera fa ny sehatra ny media no tena tian'ny media;
ny antsasaky ny pin dia Pinterest dia efa maherin'ny 1.600 eo ho eo noho ny lahatsoratra Facebook rehetra.
Ity tahirin-tsoratra statistika ity dia mampiseho antsika fa ny Pinterest no toerana tsara indrindra ho an'ny fampiroboroboana maimaim-poana sy fananganana rohy. Manome anao fahafahana hizaranao ny votoatiny izany, ary ahafahanao miverina any aoriana ary mifandray amin'ny mpihaino anao. Izany no mahatonga ny raharaham-barotra azonao ampiasaina amin'ny fomba maika hampiasaina amin'ny tranokala Pinterest ho an'ny tetik'asa fanatsarana ny fikarohana.
Inona no tokony ho fantatrao momba ny famoronana rohy amin'ny Pinterest?
Ny votoaty rehetra amoanao amin'ny haino aman-jery sosialy dia tokony miaraka amin'ny sary mba hampiasa ireo mpampiasa azy ary hamela azy ireo hahatakatra tanteraka ny dikan'ny teninao ao amin'ny lahatsoratry ny lahatsoratra na lahatsoratra. Ny fananana sary malaza dia mety hahatonga ny mpamaky ho sahiran-tsaina sy handany ny lalao organika. Pinterest dia sehatra media izay ankasitrahana ny votoaty. Izany no mahatonga ny sary sasantsasany hanaraka ny tetezana eo amin'ny mpanjifa sy ny orinasa. Izany no mahatonga ny famokarana sira mifandraika amin'ny tranokala; Tokony ho azonao antoka fa manana votoaty hita maso ianao ary manintona amin'ny Pins.
Ankoatra izany, ny ampahany amin'ny fampielezan-tserasera amin'ny haino aman-jery sosialy dia tokony ho fanatsarana ny mombamomba azy. Ny fahafahanao mahazo ny rohy ekena ivelany. Raha manana takaitra tsy feno tanteraka ianao, dia mety ho sahirana mitady hosoka sy tsy hay lazaina ary tsy hisy zava-mahagaga. Ireo mpampiasa dia tokony hahazo ny fampahalalana rehetra ilainy fotsiny amin'ny fijerena ny mombamomba anao.
Ny boards misy anao dia tokony ho tahirin-kevitra tanteraka amin'ny rohy, sary ary tolotra izay manome ny sandan'ny marikao. Ny lazanao eo amin'ny Pinterest mivantana dia miankina amin'ny sandan'ny votoaty omenao Source .